सलमान ९ फिल्म जुन उनले पूरा गरेनन् ! – Khabar Silo
बलिउडका सुपरहिट हिराे हुन् सलमान खान । उनका धेरै जसाे फिल्म हिट भएका छन् ।
तर, त्यस्ता केही फिल्म छन् जुन सलमानकाे नामसँग त जाेडिए तर अगाडि बढ्न सकेनन् ।
त्यस्तै ९ फिल्म:
अरबाज खानले सोहेल खानको साथमा फिल्म राम (१९९४) निर्देशन गर्ने तयारी थियो । उनीहरूले ‘प्यार किया तो डरना क्या’ र ‘हेल्लो ब्रदर’जस्ता हिट फिलम दिएका थिए । तर, फिल्म यतिकै थाती रह्यो । अहिलेसम्म पनि फिल्मको सुटिङ हुन सकेको छैन ।
‘दश’ (१९९७) पनि कहिल्यै पूरा भएन । निर्देशक मुकुल आनन्दको मृत्युका कारण फिल्म पूरा हुन सकेको थिएन । यो फिल्मको लागि रेकर्ड गरिएको गीत ‘सुनो गौर से दुनियावालोँ’लाई पछि अर्को फिल्ममा राखिएको थियो ।
गायिका ज्योति मगरलाई बिहे गर्ने हतारो छ। अब हुर्केकी छोरीलाई बिहेको दबाब पनि हुँदो हो। सायद ज्योति राम्रो वरको खोजीमा छिन् क्यार ! अब मन मिल्ने साथी भएको भए पनि लगन कसिहाल्थिन् होला ! तर विचरी ज्योति अहिले सिंगल छिन्। उमेर बढ्दै गएपछि ज्योतिलाई पनि बिहेको चिन्ता बाक्लिदै जान थालेकाले होला, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बेलाबेलामा […]